कोठाभित्र कुहिँदैछ अद्भूत कला :ANZ Khabar
अक्ल्याण्डको समय: २२:०६ |सिड्नीको समय: २०:०६ |काठमाडौंको समय: १५:५१
कोठाभित्र कुहिँदैछ अद्भूत कला
नेपाल व्यूरो ।जुन १९, २०२१
काठमाडौंको डिल्लीबजार र घट्टेकुलोबीचको घनाबस्ती । यही बस्तीको माझमा एउटा सामान्य घरभित्र अद्भूत कलाको संग्रहालय छ भन्दा धेरै मानिसलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । सिंहदरबारदेखि चिया पसल हुँदै भट्टीसम्म सरकारले यसो गरेन, उसो गरेन भनेर असन्तुष्टिका स्वरहरु उठिरहँदा एउटा परिवार चुपचाप कलाको साधनामा जुटिरहेको छ । न कसैको आस, न कसैको त्रास । बरु यी अमूल्य कला कतै लोप होला कि भन्ने भयले रातदिन चिमोटिरहन्छ । उही गोविन्दबहादुर गुरुङ यो अद्भूत कलाका सर्जक हुन् । उनका बाजे दरबारका जर्नेल थिए । राणाजीका दरबारमा सजाइएका मृत जनावरका अंगबाट बनेका जीवन्त कलाले उनलाई तान्यो ।
जतिबेला ती कलाकृति विदेशबाट झिकाइन्थे । आजभन्दा ६ दशकअघि उही गोविन्दबहादुरलाई लाग्यो– नेपालीकरण गरेर कलालाई नेपाली सीप, ज्ञानमा किन नढाल्ने ? यही इच्छाशक्तिले कलायात्राको श्रीगणेश भयो । उनीभित्र कतिसम्म भूत सवार थियो भने आफ्नै खर्चले यो कलासम्बन्धी ज्ञानका लागि उनी जर्मनी पुगे । स्याङ्जाबाट पोखरा हुँदै काठमाडौं छिरेका उही गोविन्दबहादुरका पिताको राणासंँगको उठबसले छोरालाई कालिगढ बनाउन मद्दत ग¥यो । बाबुको यही पेसालाई गोविन्दले निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
हुने खाने बाउका छोरा मदन आफ्नो शोखको कुनै पेसामा जान चाहन्थे तर बाबुको मेहनत, पसिना र उनको अन्तिम इच्छा बुझेपछि उनलाई लाग्यो– मैले यी कलाको संरक्षण गर्न सकिन भने महापाप हुन्छ । त्यसैले उनी पनि होमिए टयाक्सीडर्मी कलायात्रामा । उही गोविन्दबहादुरले कलायात्रा शोखबाट शुरु गरेका थिए । कालान्तरमा यसले बृहद् कला संग्रहालयको रुप लियो । संग्रहालयमा के को कलाकृति छ भन्दा पनि के छैन भन्ने हो । मदन आठ, पाँच आउने काम बाहेक संरक्षणको पिरलोमै दिनरात हुटहुटिरहन्छन् ।
ट्याक्सीडर्मी भन्ने यो कला कतिपयका लागि नौलो पनि हुन सक्छ । ट्याक्सी डर्मी भनेको पशुपंक्षीको शरीर प्रदर्शन तथा अध्ययनका लागि केही वस्तुहरु मृत शरीरमा भरेर राख्ने वा सुरक्षित राख्ने काम वा कला हो । ट्याक्सी डर्मी भन्ने शब्द ग्रीकभाषाको ट्याक्सी डर्माबाट आएको हो । जसमा ट्याक्सको अर्थ चल्नु र डर्मा अर्थ हुन्छ छाला । अर्थात पशुपन्छीको छाला झिकेर त्यसभित्र अरुवस्तु हाल्ने र पशुपंक्षीलाई जीवत जस्तै बनाउने कला ट्याक्सीडर्मी हो । विदेशी टीभी च्यानल र युटुबमा देखेका नयाँ पुस्ताले यहाँभित्र अजिंगर, बाघ, भालुदेखि सानोमा चराजत्रो खरायो पनि हेर्न पाउँछन् । यो कलाको संग्रहालयमा जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरु शैक्षिक भ्रमणमा कहिलेकाहीँ आएर अनुगमन गर्ने बाहेक अरु उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । त्यसै पनि महँगो र दुर्लभ कला बनाउन जति कठिन छ, संरक्षणमा पनि त्यति नै टाउको दुखाई छ । बस्नका लागि बनाइएको घर, घरायसी चाँजो नमिल्दा अहिले एउटै कोठामा थुपारिएको छ । लकडाउनपछि त यी कलाकृतिको झन् विजोग भएको छ । संग्रहालयको ढोका नखोलेको वर्षौं भयो । परिवारका सदस्यहरु संक्रमणका डरले ढोका खोल्न डराउँछन् ।
दिनप्रतिदिन यी कला संकटको अवस्थामा छन् । हातमा सीप छ । मदन भन्छन– ‘कमिलादेखि हात्तीसम्म संरक्षण गर्न सकिन्थ्यो तर न काम गर्ने ठाउँ, न कसैको प्रोत्साहन ।’ मदनलाई अर्को एउटा दुखले पिरोलिरहन्छ– आफूले त जेनकेन यो कलायात्रालाई यहाँसम्म धकेलियो । आफ्नो एकमात्र सन्तान विदेशमा छन् । उनलाई बाउबाजेले पसिना बगाएको कलाप्रति कुनै मोह छैन । आफ्नो बाबुको नाममा सरकारले कुनै ठाउँ दिएर म्युजियम बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यसका लागि उनले कुन सरकारी निकाय धाएनन ? तर सुन्नेहरु सुन्छन काम गर्दैनन । एक वर्ष, दुई वर्ष हुँदै दशकौं बित्यो प्रयास थालेको तर अहिलेसम्म सिन्को सार्ने काम भएको छैन । संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्व विभागमा गरिएका प्रयास असफल भएका छन् । तर उनले मन मारेका छैनन ।
मानिस स्वभावतः प्रयोगवादी जात हो । नयाँनयाँ प्रयोग चाहन्छ । अझ एउटा सिद्धहस्त कलाकारले कलाभित्र अनौठो प्रयोग खोज्नु अनौठो होइन । विश्वका होचा नेपाली नागरिक ७२ वर्षीय चन्द्रबहादुर डाँगीको शव ट्याक्सीडर्मी गरेर दुर्लभ कला बचाउने प्रस्ताव आएको थियो । यस्तो प्रस्तावले उनी कम उत्साही भएका थिएनन । तर नेपालमा कानुनको अभाव र राख्ने ठाउँको समस्याले गर्दा त्यो अवसर गुमेकोमा उनलाई चुकचुक भइरहेको छ ।